Dhala namaa Maarsirra qubachiisuun akkamin danda'ama? - BBC News Afaan Oromoo
Dhala namaa Maarsirra qubachiisuun akkamin danda'ama?
Dhalli namaa bakkawwan baay'ee fagoo ta'an gara akka Maarsiitti walitti fufinsaan imaluuf motoraa haaraa barbaada.
Kanaafuu, Injinaroonni teeknolojii sirna soolarii keessa yeroo gabaabaatti imaluuf fayyadu kalaqaa jiru.
Sababiin isaas karaa orbiitii Maaarsiif lafti irra biiftuutti marsan gargari, Km mil 54.6 hanga Km miliyoona 401 ta'u addaan fagaata.
Ergamni gara Maarsiitti imaluus kan raawwatamu waqtii pilaanetonni lamaan walitti dhiyaatanirratti hunda'aa.
Wayita walitti dhiyaatan kanayyuu Rookkettiwwan keemikalaa balali'an(chemical rockets) fayyadamuun Maarsiirra qaqqabuuf ji'oota sagal fudhata. Akkaataa Rookkeettin ammaatti furguggifamaniin, dhalli nama gara pilaanetii diimtuu kanatti imaluuf yeroo dheeraadha fudhata.
Imalli Booying gara hawaa osoo hin milkaa'in hafe
Ergama abuurraa kana milkeessuudhaaf ogeeyyiin teeknolojii abdachiisoodha jedhaman irratti yaada dhiyeessaa jiru.
Tooftaan jalqabaa ,Rookkeettiwwan sirna annisaa tarminaala gara annisaa eliktirikiitti geeddaraniif fageenya dheera imaluu danda'an fayyadamu akka filannootti ogeeyyin yaada dhiyeessan jiru.
Kaan isaanimmoo annisaa aduu gara anniisaa elektirikaatti motoraa jijjiruu danda'an fayyadamuutu caala ogeeyyiin jedhan jiru.
Injinaroonni dhaabbata qo'annoo hawaa Ameerikaa tooftaa durii caala saffisaa ta'e uumuuf indastiriiwwan dhimmicha tumsan wajjiin hojjachaa jirraa jedhaniiru.
Teeknolojii abdataman keessaa rokkeettiin anniisaa elektirikaa soolariirraa argataniin furguggifaman fayyadamuu akka filannoo jalqabaatti dhiyaate.
Teeknolojii kanaan dhala namaa garasitti erguurraa meeshaalee fe'uun gara Maarsiitti dhala nama dursanii erguun yaadameera.
Daarektarrii Ergama Teeknolojii hawaa Dhaabbata qo'annoo hawaa NASA Jeef Sheey waan astironeetii garasitti imaluuf barbaachisan dhiyeessuuf akka fayyadu kaasani.
waan barbaannu fe'annee garasitti imaluun garuu tarii imala waggoota 2.5 gaafatudha' jedhan Dr. Sheey wayita BBCtti himan.
'Bu'aan argamu kan barbaade haa ta'u malee, gara Maarsiitti imala ji'ootan yeroo lakka'aaman gaafatu kanarraa hafu kan dandeenyu meeshaa waan barbaannu feetee geessitu yoo qabanne' jedhan.
Dhaabbanni 'Aerojet Rocketdyne' ergama kana milkeessuuf hojjata akka jirutu himame. Hoji-gaggeessaan Dhaabbatichaa, teeknolojiin kun saatalaayitoota odeeffannoo sassaabuuf oolanirratti hojiirraa duraanu oolu kaasuun isuma ol guddifna jedhan.
Anniisaa saatalayitoonni amma qaban 10-15kW (kilowatts) gara 50kW tti ol guddisuun akka barbaachisullee dubbataniiru. Anniisaa soolariitiin meeshaan dalaguu danda'aa jedhamu kun akka filannootti ilaaaluun akka danda'uu kaasuun,anniisaa fayyadamtu ol guddisuurratti rakkoleen mul'atan jiraachuus ibsaniiru.
Rakkoolee teeknolojiin kun qabu garuu furamnaan filannoo gaarii ta'uu danda'aa jedhu.
Goodayyaa suuraa Astiroonetonni malli 'thermal propulsion' jedhamu fayyadamuun carallaa hamaa nu saaxilaa jedhanii yaadda'u
Kaampaniin Booying mala nuclear thermal propulsion jedhamu fayyadamuuf fedha hin qabu Garuu yaaddoon jalqaba, Fayyaa qorattoota meeshaa kanaan imalanii balaarra buusa sodaa jedhu uumuusaati.
Yaadni biraammoo electric ion propulsion jedhanii waamu. Rokkeettiwwan akkasi fayyadamuun anniisaa uumamuun fageenya dheera samii keessa imaluuf itti gargaaru yaada jedhu ogeeyyin dhiyeessanis jiru.
Tooftaan kana saatalaayitoonni durumaanu fayyadamaniiru . Haata'u malee, guulli uumuu danda'an xiqqaadha. Yeroon yoo kennameef garuu saffisa olaanaarra qaqqabuu danda'uu jedhameetu abdatama.
Annisaan karaa garaagaraa maddisiifama. Ta'us, dhala namaa gara Maarsiitti erguuf gareen qo'annoo anniisaa niwukilaaraan maddiisiifamutti fayyadamu barbaadu.
Image copyright Ad Astra
Goodayyaa suuraa Astiroonetii NASA duraanii Firaankilin Chaang Diyaaz
Astiroonootii NASA duraanii Firaankilin Chaang Diyaaz gara Pilaaniitii diimtu(Maarsiitti)imaluun akka addeessarra qubachuu sanatti salphaa mitii jedhe.
Falli barbaachisu garuu saffisaan dhaquu danda'uudha jedhe Diyaaz.
Xiyyaarri samii Meetirik toonii 400-600 ulfaatu, anniisaa meegaa Waattii 200 qabuun waggoota 39tti ji'arra qubachuu danda'a jedha.
Chaang Diyaaz injiiniin ammatti 10MW gabaarratti barbaadaman yoo fooyyeeffaman malee jedhu.
Kaampaniin 'Lockheed Martin teeknolojiin 'Vasimr' rokkeettiwwan annisaa elektirikaa aduurraa madduun furguguggifaman( solar electric propulsion)abdachiisoo akka ta'an ibseera.
teeknolojiin haaraan kun hawwataa ta'ullee qorannoo hawaa keessatti qooda kanneen qaban kaampaanii Booying fi 'Lockheed Martin' keemikaalli dhangala'aan dhala nama gara Maarsitti erguuf akka barbaachisu himu.
Dhaaabbanni 'Lockheed Martin', duraanu teeknolojiin gara Maarsiitti imaluuf nu fayyadu jira jedha.
Teeknoloojiin rookkeetti keemIkaalaa ergama Appolorratti hojiirra oolfamee argineerra jedhu. Sirna Rokkeetti Oriyoon duraanii kan jalqabsiise Sichaan namni jedhamu,' Duraanuu teeknolojii Maarsiirra nu qubsiisu qabnaa' jedhan.
'Rakkooleen muraaasni jiruu garuu teeknolojii qabnu, ijaarruufi muuxannoo samii iddoo haalaan gadi fagoo keessaa balali'uu horanne irratti caalatti hojjachuun hojii manee fuuldura keenyatti hafe, Akkasumallee teeknolojiin jabeeffamu fuulduraaf bu'uura ta'uu danda'aa' jedhan.
Teeknolojiin sadarkaa jalqabaa Haayidiroojinii-Oksijiinii fayyadamuu bara 1960 irraa jalqabee hojiirraa ooluun milka'uusaas dubbatan.
NASA'n rokkeetti furguggisu Haadiroojinii dhangala'aa afurii fi Oksijiinii injinii rokkeetti RS-25 akka barbaachisu ispeeshalistiin rokkeetti furgurgisuu dhaabbata Booying Roob Birooriin BBC tti himaniiru.
Ogeessii kun injiiniin rokkeetti kun amansiisaa ta'uudha dubbatu.
Teeknolojii amansiisa ta'uun isaa mirkana'e qabachuunimmoo ofitti amanamuummaa guddaa akka qabattuuf si fayyada,Teeknolojii haaraan kun waraqaarratti wayita barreeeffamu gaarii fakkaata, hojiitti hiikuun wayita eegalamu immoo dhimma duubatti si harkisanirratti xiyyeeffatta' jedhu ogeessi kuni.
Maarsiirra qubachuu dandeenyaa?
Qo'annoon Jaaarmiyaan qorannoo imaammata Saayiinsiif Teeknoloojii dhiyeenya baase akka agarsiisutti, ergamni dhala nama Maarsii qubsiisuuf dhaabbanni qo'annoo hawaa Ameerikaa NASA'n karoorri baase bara 2033 eegaluuf jira.
Goodayyaa suuraa NASA'n bara 2024 dhala nama deebise ji'a qubsiisuuf karoorsera
Bajatni dhaabbata qo'annoo Hawaa Ameerikaaf ramadamuu garuu yeroo karoorfametti ji'arra qubachuuf ergama karoorfametti gufuu ta'uu akka hin hafne Jaaarmiyaan qorannoo imaammata Saayiinsiif Teeknoloojii kun ibseera.
Kanarraa ka'uudhaan jaarmiyaan qo'annnoo kun yeroon dhalli namaa ergama qo'annoo gara Maarsiitti imalu bara 2039 darbuu akka danda'u ibseera.
Waayit Haas garuu akka jedhutti, bara 2024 tti dhaabbatichi ji'a abuuruuf karoorri qabate yeroo qabameefitti akka raawwatamu beeksise.
Dr. Paahol Dimotakis Pirofeessarri kalaqa xiyyaaraa samiifi appilayiid Fiiziksii jaarmiyaa teeknoloojii Kaalifoorniyaa akka jedhanitti, teeknolojii kanarrattis ta'ee rookkeetti keemikaalaatti fayyadaman furguggisuurratti yaada dhiyaaterratti shakki qabu. yaadichitti salphaatti amanaa hin jiran.
'Akkamitti keemikaalaa amma gahaa ta'etti fayyadamuun fageenya dheeraa imaluun akka danda'amurratti anis deebii hin arganne, Rokkeettin Haayidiroojiin Oksijiiniidhaan imaltu ji'oota 6 caala turuu danda'uun hin beekamne'
'Fala teekninikaa dhimma hundumaa furuu dnda'uus hin qabnu, Dabalataanimmoo,namni qabatamaan dhugaan akkasii jiraachusaa mul'isu otoo dhala namaa gara Maarsiitti hin ergiin jiraachuu qaba,Dhimmoonni kunneen ammas yeroo NASA dhaaf qabameefin wal hin simu' jedhan, Dr. Paahol Dimotakis Pirofeessarri kalaqa xiyyaara balalii fi appilayiid Fiiziksii jaarmiyaa teeknoloojii Kaalifoorniyaa
Imalli Booying gara hawaa milkaa'uu hafnaan 'Starliner' deebi'ee qubate
Maraatoonii Landan irratti Qananiisaafi Kipchoogeen waliif baana jedhan
Itoophiyaatti sagantaan tajaajila hawaasaa eebbifamtootaa eegaluuf